Somaliland Iyo Mowqifkeeda Xiisadda ka Dhex Oogan Iiraan Iyo Sucuudiga |
Somaliland Iyo Mowqifkeeda Xiisadda ka Dhex Oogan Iiraan Iyo Sucuudiga
Hargeysa(GNN)-Wasiirka wasaaradda Arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire, ayaa sheegay in dalka Sucuudigu xaq u leeyahay inuu sharcigiisa mariyo ciddii dambi ka gashay dalkiisa.
“Xaalad kasta oo adag oo ka dhacda Geeska Afrika ama jasiiradda Carabta dhibkeedu wuu na saamaynayaa , sidaa awgeed waxa aanu jecel nahay In wax kasta oo khilaaf ah oo jira in lagu dhammeeyo wada hadal. Sucuudiguna xaq ayuu u leeyahay isagoo raacaya sharcigiisa Iyo nidaamkiisa in ciddii uu u arko in dambi ka gashay wadankiisa inuu mariyo nidaamkiisa.Sidaas ayaanu u aragnaa Laakiin waxa aanu jecel nahay laba wadan oo Islaam ah weeye Iiran iyo Sucuudigu. Markaa waa in wada hadal lagu dhammeeyo khilaafka ka dhexeeya,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shirre oo isaga oo ku sugan Ingiriiska u warramay laanta afsoomaaliga ee BBC-da.
Wasiir Sacad oo ka jawaabayay su’aal la xidhiidhay halka ay ku dambeeyeen wada hadalladii u socday Somaliland Iyo Soomaaliya, waxa uu yidhi “Wada hadalladaasi waxay bilaabmeen sannadkii 2012-kii.Mudadii ka dambaysay illaa sagaal jeer ayaa la kulmay. Wada hadaladaa aad iyo aad ayaan u soo dhawaynaynaa muhiim ayay yihiin haddii aad cid waxa isku haysaan. Sida ugu fudud ee wax lagu xalin karaa waa wada hadal, hase yeeshee waxa aad moodaa in cago jiidku ka jiro dhinaca Somalia.Waxaanan rejaynaynaa in cago jiidkaasi meesha uu ka baxo oo sida ugu dhakhsaha badan dib loogu bilaabo wada hadalkaas.”
Wasiirku waxa uu sheegay in ay ku dedaalayaan sidii Somaliland u heli lahayd aqoonsi buuxa, waxaanu yidhi “Muddo badan ayaan aqoonsi raadinay, baratakoolka marka la eegana sida dalalka la ictiraafsan yahay ayaa naloo siiyaa, Waxaanu ku kalsoonahay In nala ictiraafi doono.
Wax badan ayaana laga qabtay siyaasadda arrimaah dibada shantii sanno ee dawladda KULMIYE jirtay. Aniga iyo wasiirradii iga horeeyayna isku ujeedo ayaan leenahay waxaanu ka wada shaqeynaynay sidii wadanka loogu heli lahaa aqoonsi.”